Opera Reborn bịarutere, ụdị ihe nchọgharị ọhụrụ, nke zuru oke maka mwekota na netwọkụ mmekọrịta | Esi m mac
Opera Reborn dị ebe a, ụdị ihe nchọgharị ọhụrụ, nke zuru oke maka mwekota na netwọkụ mmekọrịta
O yiri ka n'oge na-adịbeghị anya, ahịa nchọgharị na-achịkwa Google Chrome na Apple's Safari. Ruo oge ụfọdụ, isi ihe achọrọ na ihe nchọgharị bụ ọsọ, na-esote nchebe. Mgbe ahụ arụmụka ahụ metụtara iri ihe onwunwe nke ibe a dị mkpa n'oge anyị taa.
Mana ọ dị mma na e nwere ụdị dị iche iche. Iche iche onwe ya ga-abụrịrị ụkpụrụ nduzi opera ga-eso, na-enye ihe nchọgharị zuru oke maka netwọkụ mmekọrịta. Site taa anyị mara ụdị nchọgharị ya ọhụụ, aha ya jupụtara na nzube, ejikere ịlọ ụwa (ejikere ozo na Bekee) nke bu nkwuputa doro anya nke ebumnuche.
Ke akpa ilekiri, ọ pụtara n'ihi na a revamped interface na maka mkpa e nyere netwọkụ mmekọrịta. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata ihe m na-ekwu maka ya, ị nwere ike ile vidio na-esonụ:
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, njikọ nke netwọkụ mmekọrịta na ihe nchọgharị weebụ aghọwo ihe na-ewu ewu. Agbanyeghị, ịgbanwee n'etiti taabụ mgbe ị na-azaghachi ozi abụrụla ihe siri ike na adabaghị, ruo ugbu a. Site na ihe nchọgharị ọhụrụ, Opera na-enye ndị ọrụ ohere ikwukọrịta na ihe nchọgharị ahụ na-enweghị ntinye ma ọ bụ ngwa ọ bụla.
Krystian Kolondra, na-ahụ maka Opera nchọgharị kwuru, sị:
Netwọk mmekọrịta gbanwere ndụ anyị kpamkpam ma nye anyị ohere ịrụ ọrụ, ịchọpụta ihe ọhụrụ ma na-ekwurịta okwu n'otu oge ... Mgbanwe a abịarutewo na smartphones, kama desktọọpụ na laptọọpụ, yana ihe eji arụ ọrụ ọtụtụ ọrụ ike karịa. Anyị kwenyere na nke a ga-agbanwe.
Bornlọ ụwa na-abịa na-ebu akụkọ nke mere na ndị ọrụ jikọtara ya mgbe ị na-eme nchọgharị. Ihe ohuru gunyere:
Direct uzo na ụdị nke web: Facebook ozi, WhatsApp, Telegram. Kpọmkwem site na ihe nchọgharị mmanya.
Na-agagharị na nyocha ma na-ede ihe na sidebar.
Enwere nhọrọ nke bido mkparita uka.
Shakekọrịta foto dị mfe: Nanị họrọ otu akụkụ nke ihuenyo ma ị nwere ike ịkekọrịta nhọrọ ahụ.
Mgbanwe dị n'etiti netwọkụ mmekọrịta na-abata n'egbughị oge, n'ihi nnweta nnweta.
Ihe nchọgharị a bụ ahụmịhe ọhụụ. Yabụ, ọ bụrụ na ikpebie ibudata ya, lee njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Opera Reborn dị ebe a, ụdị ihe nchọgharị ọhụrụ, nke zuru oke maka mwekota na netwọkụ mmekọrịta
Sistemụ Cleaner & Antivirus, Mac gị dị njikere maka naanị otu euro
Microsoft Visual Studio dị ugbu a maka Mac na nsụgharị ikpeazụ ya